मेष(चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) लामो समयदेखि रोकिएर बसेका कामहरु सुचारु हुनाले आर्थिक अवस्था सुदृढ हुनेछ । प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिलो हुने तथा पारिवारिक माहोलमा जमघट भई मिष्टान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । अध्ययनमा सुधार गर्दै लैजान सकिनेछ । काम गर्न जोस जागर आउनाले रचानात्मक कार्य शुभारम्भ गर्न सकिनेछ भने काममा सहयोग गनेहरु प्रशस्त भेटिनेछन् ।
बृष(ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो) समय मध्ययम रहेकोले व्यापारमा मन्दिर आउने तथा लगानी नउठ्नाले दैनिकी प्रभावित हुनेछ । काम गर्दा नियमसंगत गर्नुहोला जरिवाना तथा दण्ड तिर्नुपर्ने हुनसक्छ । राम्रो हुने आशामा धेरै बस्तु त्याग्नु पर्ने बाध्यता आउँनेछ । तर पनि लामो दुरिको विदेश यात्राको गतिलो योग रहेको छ भने विदेशी भुमिमा बसेर काम गर्नेहरुका लागि समय फलदायि रहनेछ ।
मिथुन(का,की,कू,घ,ङ,छ,के,को,हा) सामाजिक तथा तारिफयोग्य काम गरी चर्चामा आउन सकिनेछ । छुट्टिएका प्रेम सम्बन्ध पुन: सुचारु हुने तथा मित्रताको बन्धन कसिलो भएर जानेछ । विशिष्ट व्याक्तिहरुको सहयोगले सहजै लक्ष्य प्राप्ती हुनेछ । पैतृक धन तथा सम्पतिको प्रयोग मार्फत मनग्गे धन आर्जन गर्न सकिनेछ । अध्ययनमा राम्रो प्रगति हुने तथा पुरस्कार जित्न सकिनेछ ।
कर्कट(ही,हू,हे,हो,डा,डी,डु,डे,डो) सानो लगानि गर्दा पनि समयले साथ दिने हुनाले लगानी फस्टाई मनग्गे धन आर्जन गर्न सकिनेछ । मन परेको मानिसबाट भौतिक सम्पति तथा उपाहार प्राप्त हुने गतिलो योग रहकोछ । राज्यको मेकानिजम भित्र बसेर काम गर्नेहरुले मान सम्मान पाउनेछन् । कृषि तथा पशुपालन व्यवसायलाई समयसापेक्ष आधुनिकीकरण गरी लाभ लिन सकिनेछ ।
सिहं(मा,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टू,टे) ईमान्दारी तथा लगनशील भई लाग्नाले मात्र भनेजस्तो सफलता हात पार्न सकिनेछ । जीवनशैली व्यास्त रहे पनि उपलब्धि भने न्युन हुनेछ । राजनीतिज्ञ तथा सामाजिक काम गर्नेहरुले तपाईको काम समयमा नगर्दिनाले हातमा आइसकेको उपलब्धि फुत्कन सक्छ । यात्रा गर्दा वा यात्रासँग सम्बन्धित काम गर्दा ध्यान दिनुहोला ।
कन्या(टो,पा,पी,पु,ष,ण,ठ,पे,पो) सानातिना समस्याले तपाईलाई कमजोर बनाउनेछ । रिस्क लिने बानीले थप समस्या पैदा गर्नेछ । व्यापारमा लगानी गरे पनि आम्दानि न्युन हुनेछ । खानपानमा ध्यान दिनुहोला स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ । प्रेम तथा मित्रताको बन्धन नचाहँदा नचाहँदै टुट्न सक्छ । खोजमुलक कामको सवालमा लामो दुरिको यात्रा हुने योग रहेकोछ ।
तुला(रा,री,रु,रे,रो,ता,ती,तू,ते) विलाशी तथा भौतिक बस्तुको पहिरनले व्याक्तित्वमा चमक आउनेछ । सवारी साधन तथा महंगा वस्तुहरुको प्रयोग मार्फत् अरुको ध्यान तान्न सकिनेछ । व्यापारमा लगानी गरी मनग्गे धन आर्जन गर्न सकिनेछ । व्यापार व्यावसायबाट मनग्गे धन आर्जन गर्न सकिनेछ भने व्यापारकै सवालमा यात्रा हुने योग रहेको छ । प्रेममा नजिक हुने समय रहेको छ ।
बृश्चिक (तो,ना,नी,नू,ने,नो,या,यी,यू) प्रतिष्पर्धि तथा सत्रुहरुलाई किनारा लगाउदै बिजय हुने योग रहेकोछ । बिद्या तथा नोकरिमा हुने प्रतिष्पर्धामा तपाईको नाम अग्र स्थानमा आउनेछ । व्यापार व्यावसाय अर्थात पछिसम्म फाईदा हुने काम सुरु गर्न सकिनेछ । आफन्त तथा मावली पक्षको सहयोग पाईनाले मन प्रसन्न हुनेछ । प्रेम तथा मित्रताको बन्धन कसिलो भएर जानेछ ।
धनु(ये,यो,भा,भी,भू,ध,फा,ढा,भे) शरिर स्वास्थ्य नहुनाले काम गर्न असजिलो महशुष हुनेछ । साथ तथा समर्थन दिने साथिभाईहरुले असहयोग गर्नेछन् । पढाई लेखाईमा मन नजादा अरुभन्दा पछि परिनेछ । व्यापारमा समय दिने व्यापारीहरुका लागि समय मध्ययम रहेकोले थोरै आम्दानिमा चित्त बुझाउनु पर्नेछ । प्रेममा रमाउन चाहनेहरुका लागि समयले आशिंक साथ दिनेछ ।
मकर(भो,जा,जी,जू,जे,जो,ख,खी,खू,खे,खो,गा,गी) परिवार तथा आफन्त सँग घरायसि कुरामा मतभेद तथा शैद्धान्तिक राय बाजिनेछ । आफन्त तथा अग्रजहरुसँग टाडिएर यात्रा गर्नुपदा मन खिन्न हुनेछ । अध्ययनमा समय प्रशस्त दिएपनि नतिजा न्युन आउनेछ । राजनीति तथा सामाजिक काममा समय खर्चिनेहरुका लागि आलोचनात्मक समर्थन पाउने योग रहेकोछ ।
कुम्भ(गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सो,दा) साधन स्रोतको प्रयोग मार्फत आफुलाई अपडेट गर्ने समय रहेकोछ । साहित्य रचना तथा लेखनमा रुचि बढ्नेछ । खेलकुद तथा यस्तै पराक्रमि क्रिर्याकलापमा भाग लिनेहरुले भनजस्तो नतिजा हात पार्न सक्नेछन् । आर्थिक गतिबिधिहरु दोहोरो अंकमा बृद्धि हुनाले दैनिकी सहज हुनेछ । माया प्रेममा सामिप्यता बढेर जानेछ । छोटो दुरिको रमाईलो यात्रा हुने योग रहेकोछ ।
मीन(दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची) आफन्त तथा शुभचिन्तकको भावना तथा सल्लाह-सुझावलाई बेवास्ता गर्दा दुख पाईनेछ । व्यापारमा मन्दिर आउनेछ भने नयाँ लगानीको लागि केही समय कुर्नुनै उत्तम हुनेछ । धन तथा भौतिक सम्पति प्रयोग गर्न कसैलाई पनि नदिनुहोला सामानमा क्षति पुग्ने तथा दिइएको धन फर्केर आउनेछैन । तर पनि परिवारका साथ मिष्टान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवसर जुर्नेछ ।
आज श्री शाके १९४२ बि.स.२०७७ साल श्रावण २१ गते बुधबार इश्वी सन २०२० अगस्त ५ तारीख भाद्र कृष्णपक्ष द्वितीया तिथी धनिष्ठा नक्षत्र ०९ः२३ बजे सम्म पश्चात शतभिषा नक्षत्र सौभाग्य योग पश्चात शोभन योग तैतिल करण चन्द्रंमा कुम्भ राशिमा आनन्दादि योगमा मित्र योग प्रमादीनाम संवत्सर सुर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु रोपाइँजात्रा ,दथुसाय यलमतया (ज्यो.प.सरोज घिमिरे) मेष राशि […]
आज २०७७ असार ३१ गते बुधबार। ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? ज्योतिष एस्ट्रो राजले यस्तो फलादेश गर्नुभएको छ- मेष – चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ नयाँ व्यापार व्यवसाय गर्दा उत्तम […]
सी फर्केपछि चीन भन्छ- ‘बीआरआई निर्माण गर्न नेपाल महत्वपूर्ण सहयात्री’